Aza mifamahan-dalitra ! | NewsMada
Aza mifamahan-dalitra !
Par Taratra sur 22/11/2017
Volamena, vatosoa, makamba, hazo sarobidy, olona mahay sy lalin-tsaina… Samy ananan’i Madagasikara avokoa ireo. Nahoana ity tany manan-karem-be ity no lazainareo fa mahantra ? Satria ve izay ny tarehimarika navoakan’ny manam-pahaizana ? Ho an-dry zareo ireny mantsy, azo atao tsara ny mikajy ny vola miditra isan-tokantrano amin’ny alalan’ny raikipohy. Raha latsaky ny 2 dolara isan’andro, mahantra izay ilay firenena sy ny mponina ao aminy. Eo ihany koa ny fijerena ny harinkarena faobe na ny « PIB », sns. Fa nankaiza sy mankaiza avokoa ireo harena tsy hita pesipesenina ananan’ity Nosy ity no kajy ambony latabatra avy any andafin’ny riaka no ilazana fa mahantra i Madagasikara ? Fahan-dalitra ankitsirano !
… Satria mahantra sy tsy manana, mila miindrana. Faly, mibitaka, mipikelika ery fa nahazo famatsiam-bola avy atsy sy avy aroa. Dedaka fa naharesy lahatra ny mpanam-bola sy ny tompom-bola hono. Azo antoka hono, sns. Tsy mba lasa lavidavitra kokoa ny eritreritra ka tonga hatreo amin’ny taranaka fara sy dimby izay hibaby trosa raha vao mivoaka ny kibon-dreniny. Azo kajiana tsara amin’ny alalan’ny raikipohy eo ambony latabatra ny trosa baben’ny Malagasy tsirairay vokatry ny fisamboram-bola « ataon’i Madagasikara ». Fa maninona no tsy dradradradraina tahaka ny nahazoana vola tatsy sy taroa ny tarehimarika tahaka izany ? Na izany aza, re tsilian-tsofina eny ihany fa na ny zaza mbola any am-bohoka aza izao efa mibaby trosa noho ireo volabe nindramina hatramin’izay !
… Marobe ny zavatra diso sy mifanohitra hoenti-mamahan-dalitra ny Malagasy. Ampahany ihany io. Tsy azo hodian-tsy hita, ohatra, ny tsaho sy lainga afafy isaky ny misy zava-tian-kafenina. Variana amin’ireny ny sain’ny Malagasy ka tsy afaka mifantoka intsony amin’ny fidangan’ny vidim-bary, jiro sy rano, lalana potika, harena voaroba, sns. Sa ve izay mahasoa ataon’Andriamanitra ?